MB 2016 Aogositra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2016 Aog
Heveriko fa efa nandia fotoana famoizam-po koa ianao rehefa nitalaho an 'Andriamanitra mba hitsabaka. Angamba nivavaka nanao fahagagana ianao, nefa hita mazava fa foana; tsy nahomby ilay fahagagana. Heveriko koa fa faly ianao nahafantatra fa voavaly ny vavaka natao hanasitranana olona iray. Fantatro ramatoa iray izay nitombo ny taolan'izy ireo rehefa avy nivavaka ny fanasitranana azy. Nanoro hevitra azy ny dokotera hoe: "izay ataonao dia tohizo ihany!" Maro amintsika, azoko antoka, no mahazo aina sy mampahery satria fantatsika fa ny hafa dia mivavaka ho antsika. Mampahery ahy hatrany rehefa misy olona milaza amiko fa izy ireo no mivavaka ho ahy. Ho valin'izany, dia matetika aho milaza hoe: "Misaotra betsaka tokoa, tena mila ny vavakao rehetra aho!"
Heverin'ny saina diso
Ny zavatra niainantsika momba ny vavaka dia mety ho tsara na ratsy (mety ho izy roa). Tsy tokony hohadinointsika àry izay nomarihin’i Karl Barth hoe: “Tsy ny fangatahantsika no tena zava-dehibe amin’ny vavaka ataontsika, fa ny valim-bavaka” (Prayer, p. 66). Mora diso hevitra ny fihetsik’Andriamanitra raha tsy araka ny nantenaina no namaliany izany. Ny olona iray dia vonona haingana ny hino fa ny vavaka dia dingana mekanika - afaka mampiasa an'Andriamanitra ho toy ny milina mpivarotra cosmic izay manipy ny faniriany ary azo raisina ny "vokatra" irina. Io toe-tsaina diso lalana io, izay manakaiky ny endriky ny kolikoly, dia matetika miditra ao anatin'ny vavaka mikendry ny hifehy ny toe-javatra tsy manan-kery atrehintsika.
Ny tanjon'ny vavaka
Ny vavaka dia tsy natao hahatonga an’Andriamanitra hanao izay tsy tiany hatao, fa mba hiarahana amin’izay ataony. Tsy midika koa izany hoe te hifehy an’Andriamanitra, fa ny fanekena fa izy no mifehy ny zava-drehetra. Manazava izany toy izao i Barth: “Amin’ny fanondrotana tanana amin’ny vavaka no manomboka ny fikomiantsika amin’ny tsy rariny eto amin’ity tontolo ity”. Tamin’ny alalan’io fanambarana io no niaiky izy fa isika, izay tsy naman’izao tontolo izao, dia mirotsaka amin’ny fivavahana amin’ny asa nanirahana an’Andriamanitra ho an’izao tontolo izao. Raha tokony hanaisotra antsika amin’izao tontolo izao (miaraka amin’ny tsy rariny rehetra ao aminy), ny vavaka dia mampiray antsika amin’Andriamanitra sy ny asa nanirahana Azy hamonjy izao tontolo izao. Satria Andriamanitra tia izao tontolo izao, dia naniraka ny Zanany ho amin’izao tontolo izao Izy. Rehefa manokatra ny tenantsika amin’ny fo sy saina amin’ny sitrapon’Andriamanitra amin’ny vavaka isika, dia mametraka ny fitokiantsika amin’ilay tia izao tontolo izao sy antsika. Izy no nahalala ny farany hatrany am-piandohana ary afaka manampy antsika hahatsapa fa io fiainana ankehitriny misy fetra io no fiandohana fa tsy fiafarana. Io karazana vavaka io dia manampy antsika hahita fa tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra izao tontolo izao, ary manova antsika mba ho mpitondra ny fanantenana eto sy ankehitriny ao amin’ilay fanjakan’Andriamanitra izay mivelatra ankehitriny. Rehefa mitranga ny mifanohitra amin’izay nangatahin’izy ireo, dia lavo amin’ny fiheverana an’Andriamanitra lavitra sy tsy liana ny olona sasany. Ny hafa indray avy eo dia tsy maniry na inona na inona hifandraisany amin’ny finoany an’Andriamanitra. Izany no niainan'i Michael Shermer, mpanorina ny Fikambanana Skeptic. Very finoana izy rehefa naratra mafy tamin’ny lozam-piarakodia ilay sipany tany amin’ny oniversite. Tapaka ny hazondamosiny ary ny paralysis teo amin’ny valahany no nahatonga azy hiantehitra amin’ny seza misy kodiarana. Nino i Michael fa tokony ho namaly ny vavaka ho an’ny fanasitranana azy Andriamanitra satria olona tena tsara izy.
Ny vavaka dia tsy fomba te hitari-dalana an'Andriamanitra, fa ny fanekena amim-panetren-tena fa eo ambaniny ny zavatra rehetra, fa tsy antsika. Manazava toy izao i CS Lewis ao amin’ilay bokiny hoe God in the Dock: Tsy afaka mitaona ny ankamaroan’ny zava-mitranga eo amin’izao rehetra izao isika, fa afaka mitaona ny sasany. Mitovitovy amin’ny tantara an-tsehatra izay nomen’ny mpanoratra ny toerana sy ny tetika ankapoben’ny tantara; Na izany aza, mbola misy ny fotoana tsy maintsy improvise ny mpilalao. Mety ho hafahafa ihany ny antony avelany hanao zavatra tena misy isika amin’ny voalohany, ary vao mainka mahagaga fa nivavaka izy fa tsy fomba hafa. Nilaza i Blaise Pascal, filozofa kristiana, fa Andriamanitra dia “nametraka vavaka mba hanomezam-boninahitra ny zavaboariny mba hiova”.
Mety ho marina kokoa ny filazana fa Andriamanitra dia nihevitra ny vavaka sy ny asa ara-batana ho an’io tanjona io. Nomeny voninahitra ny zavaboary kely mba hahafahany mandray anjara amin'ny hetsika amin'ny fomba roa. Izy no namorona ny zava-drehetra momba izao rehetra izao, mba hahafahantsika mampiasa azy io ao anatin’ny fetra sasany; mba ahafahantsika manasa tànana sy mampiasa azy ireny hamelomana na hamonoana ny mpiara-belona amintsika. Toy izany koa, Andriamanitra dia nihevitra tao amin’ny drafiny na ny fizotry ny tantarany, fa mamela malalaka malalaka izy io ary azo ovaina ho valin’ny vavaka ataontsika. Hadalana sy tsy mety ny mangataka fandresena amin'ny ady (raha andrasana hahalala izay tsara indrindra); Hadalana sy tsy mety izany raha mangataka andro tsara sy manao akanjo orana - moa ve Andriamanitra tsy mahalala tsara na tokony ho maina isika na ho lena?
Nomarihin’i Lewis fa tian’Andriamanitra hifandraisana aminy amin’ny alalan’ny vavaka isika ary manazava ao amin’ny bokiny hoe Miracles fa efa nanomana ny valin’ny vavaka ataontsika Andriamanitra. Mipetraka ny fanontaniana hoe: nahoana no mivavaka? Namaly i Lewis hoe:
Rehefa manolotra ombam-bavaka ny vokatra isika, ohatra, ny fifandirana na ny fifampidinihana ara-pitsaboana, dia matetika no tonga amintsika (raha mba fantatsika fotsiny) fa efa nisy fanapahan-kevitra iray na fomba hafa. Heveriko fa tsy hevitra tsara ny hampitsaharana ny fivavahana. Efa tapa-kevitra tokoa ny hetsika – amin’ny heviny hoe “talohan’ny andro rehetra sy izao tontolo izao” no nanapahana azy. Na izany aza, ny zavatra iray izay raisina amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra izay tena mahatonga azy io ho hetsika voafaritra dia mety ny vavaka ataontsika ankehitriny.
Fantatrao ve izany rehetra izany? Mba hamaliana ny vavakao, mety ho nieritreritra ny hivavaka Andriamanitra. Ny fehin-kevitra avy amin'izany dia mahatonga anao hieritreritra sy hahafinaritra. Hita miharihary fa manan-danja ny vavaka ataontsika; misy dikany izy ireo.
Nanohy i Lewis:
Na dia manafintohina aza, dia manatsoaka hevitra aho fa amin'ny tolakandro dia afaka ny ho mpandray anjara amin'ny rojo anton-javatra iray izay efa nitranga tamin'ny 10.00 maraina isika (Ny mpahay siansa sasany dia mahita fa mora kokoa ny mamaritra azy io noho ny maneho izany amin'ny ankapobeny. fomba azo takarina). Alao sary an-tsaina fa tsy isalasalana fa ho toy ny voafitaka isika izao. Manontany aho izao hoe: "Ka rehefa vitako ny vavaka dia afaka miverina ve Andriamanitra ka hanova izay efa nitranga?" Tsia. Efa nitranga ny zava-nitranga, ary anisan'ny antony nahatonga ny fanontaniana toy izany ianao fa tsy nivavaka. Ka miankina amin'ny safidiko koa izany. Mandray anjara amin'ny endriky ny cosmos ny asako malalaka. Io fandraisana anjara io dia natsangana tany amin'ny mandrakizay na "talohan'ny andro rehetra sy izao tontolo izao", saingy ny fahatsapako izany dia tsy tonga amiko afa-tsy amin'ny fotoana iray ao anatin'ny filaharan'ny fotoana.
Ny vavaka dia manao zavatra
Ny tian'i Lewis holazaina dia ny hoe manao zavatra ny vavaka; manana foana ary ho sitrapo foana. Nahoana? Satria ny vavaka manome antsika fahafahana hirotsaka amin'ny ataon'Andriamanitra amin'ny zavatra nataony, ankehitriny sy hataontsika izao. Tsy azontsika ny hoe ahoana ny fifandraisan'ny zava-drehetra sy miara-miasa: siansa, Andriamanitra, vavaka, fizika, fotoana sy habakabaka, zavatra toy ny mekanika miangavy ary ny mekanika saika, kanefa fantatsika fa Andriamanitra no namaha ny zava-drehetra. Fantatsika koa fa manasa antsika handray anjara amin'ny zavatra ataony izy. Zava-dehibe ny vavaka.
Rehefa mivavaka aho, dia heveriko fa tsara kokoa ny mametraka ny vavaka ataoko eo am-pelatanan’Andriamanitra, satria fantatro fa hanombana azy ireo araka ny tokony ho izy izy ary hampiditra izany ao amin’ny fikasany tsara. Mino aho fa Andriamanitra dia manova ny zava-drehetra ho amin'ny tsara kokoa amin'ny fikasany be voninahitra (anisan'izany ny vavaka ataontsika). Fantatro koa fa ny vavaka ataontsika dia tohanan’i Jesosy, mpisoronabe sy mpisolovava antsika. Manaiky ny vavaka ataontsika Izy, manamasina azy ary mizara izany amin’ny Ray sy ny Fanahy Masina. Noho izany antony izany dia heveriko fa tsy misy vavaka tsy voavaly. Ny vavaka ataontsika dia mitambatra amin’ny sitrapo sy ny tanjona ary ny iraka nampanaovina an’Andriamanitra Telo Izay Iray – ny ankamaroany dia efa voafaritra talohan’ny nanorenana izao tontolo izao.
Raha tsy haiko ny manazava tsara ny antony maha-zava-dehibe ny vavaka, matoky an'Andriamanitra aho. Izany no antony ampaherezana ahy rehefa mianatra aho fa mivavaka ho ahy ny mpiara-miasa amiko ary manantena aho fa mahazo fampaherezana koa ianao satria fantatrao fa mivavaka ho anao aho. Tsy ny hanandrana mitarika an'Andriamanitra no ataoko fa ny hidera an'Ilay nitarika ny zava-drehetra.
Misaotra sy misaotra an'Andriamanitra aho fa Tompon'ny zavatra rehetra ary zava-dehibe aminy ny vavaka ataontsika.